Leather Card Holder 1. Leather 2. Customized Color 3.Customized Size 4. customized logo is available လူကြီးမင်းတို့ Marketing Plan,Marketing Events တွေမှာ Customers များနဲ့ လူကြီးမင်းတို့တစ်သားထဲရှိနေစေဖို့ အတွက် Leather Card Holder များပေါ်တွင် လူကြီးမင်းတို့ logoများ,Brand Name, Brand logo Product Name,Product Logo များဖြင့်အမှတ်တရလက်ဆောင်ပေးနိုင်ပါပြီ။ Ph:099 70882653,09 776111379 email : [email protected] သို့ မဟုတ် Chat Box မှလဲဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ Brand များအောင်မြင့်ဖို့ အတွက် SMART PLAY မှာပါဝင်အားဖြည့်ကူညီပေးပရစေ။
Leather USB Flash Drive 1. 4GB/8GB/16GB/32GB 2.3years 3. customized logo is available လူကြီးမင်းတို့ Marketing Plan,Marketing Events တွေမှာ Customers များနဲ့ လူကြီးမင်းတို့တစ်သားထဲရှိနေစေဖို့ အတွက် Leather USB Flash Driver များပေါ်တွင် လူကြီးမင်းတို့ logoများ,Brand Name, Brand logo Product Name,Product Logo များဖြင့်အမှတ်တရလက်ဆောင်ပေးနိုင်ပါပြီ။ Ph:099 70882653,09 776111379 ,email :[email protected] သို့ မဟုတ် Chat Box မှလဲဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ Brand များအောင်မြင့်ဖို့ အတွက် SMART PLAY မှာပါဝင်အားဖြည့်ကူညီပေးပရစေ။
23000000 ~ 24000000 Kyats
Ciaz ကားလေးကတော့ Suzuki မှ 2017 မှာ စတင်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ Brand New ဖြစ်ပြီး Engine Power 1400cc ဖြစ်ပါတယ်။ Left Hand Drive ဖြစ်ပြီး ကျယ်ဝန်းတဲ့အတွင်းခန်းပါရှိပါတယ်။ ကားတန်းဖိုးကတော့ 245 သိန်းဖြစ်ပြီး ဝယ်ယူသူအမည်ပေါက် ရန်ကုန်လိုင်စင်လဲရရှိနိုင်ပါတယ်။ Suzuki Ciaz ကားလေးများကိုအမှတ် (၅၀/၅၂)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းမပေါ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော Ye Nadi Motor တွင်လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါသည်။ 09 770098897 သို့ ဆက်သွယ်၍လည်း မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
Erltga ကားလေးကတော့ Suzuki မှ အသစ်ထုတ်လုပ်ထားသော7seater Brand New ကားဖြစ်ပါတယ်။ Engine Power 1400cc ဖြစ်ပြီး ဘက်စုံသုံး MPV Type ကားလေးဖြစ်ပါတယ်။ ကားတန်းဖိုးမှာ သိန်း 230 ဖြစ်ပြီး အမည်ပေါက် / ရန်ကုန်လိုင်စင် လဲရရှိနိုင်ပါတယ်။ အရစ်ကျဝယ်ယူလိုသူများလည်း AYA Bank နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်။ အာမခံအနေဖြင့် Warranty3နှစ် Kilo တစ်သိန်းပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါကားများကို အမှတ် (၅၀/၅၂)၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းမပေါ်တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော Ye Nadi Motor တွင်လာရောက်ကြည့်ရှုအားပေးနိုင်ပါသည်။ 09 770098897 သို့ ဆက်သွယ်၍လည်း မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
Vinyl Printing &amp; Advertising
Entity Design ဗီနိုင်း နှင့် စတေကာ ကြာ်ငြာ လုပ်ငန်းမှ လူကြီးမင်းတို့အတွက် လိုအပ်သော ကြော်ငြာခြင်းများကို Digital Inkjet Printing စက်ဖြင့် လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျ ပြုလုပ်ဝန်ဆောင်မှု့ ပေးလျက် ရှိပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ ၏ လိုအပ်သော Printing ကြော်ငြာများကို လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျ နောက်ဆုံးပေါ် Digital Inkjet Printing စက်ဖြင့် ပြု လုပ်ပေး လျက်ရှိပါသည်။ ဒါ့ကြောင့်လူကြီးမင်းတို့ အနေဖြင့် ၄င်း စက်ဖြင့် ဗွီနိုင်း၊ စတေကာနှင့် အခြား ကြော်ငြာသုံး Stands အမျိုးမျိုးတို့ ကို အသုံးပြု လိုပါက Entity Design ဗွီနိုင်းကြော်ငြာ လုပ်ငန်းသို့ တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
The Sky Advertising ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ကုန်ပစ္စည်း ရောင်းအား မြင့်တင်ရေးအတွက် အထိရောက်ဆုံး အထောက်အကူ ပြုနိုင်သော Uni Board, Mini Board, Light Box, Shop Name, Bus Stand, Structure များကို လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်း ကျ ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိပါသည်။ လူကြီးမင်းတို့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို အထိရောက်ဆုံး တိုးတက် အောင်မြင် လာစေရန် အတွက် လူကြီးမင်းတို့ ၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများကို ကြော်ငြာလိုပါက The Sky Advertising ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် နိုင်ပါသည်။ဒါ့အပြင် စီးပွားရေး ကြော်ငြာ Sign Board များကို The Sky Advertising ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ စိတ်တိုင်း ကျ တပ်ဆင် ပေးလျက် ရှိပါသည်။
The Sky Advertising ကုမ္ပဏီမှ လူကြီးမင်းတို့ ၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ကုန်ပစ္စည်းရောင်းအား မြင့်တင်နိုင်ရန် အတွက်လူကြီးမင်းတို့ ၏ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းကြော်ငြာများ ကို ကြော် ငြာပေးရာတွင် နယ်မြို့ အသီးသီး ရှိ Bill Board များကို လည်း ငှားရမ်းခြင်း ၊ ရောင်းချ ခြင်းများ အပြင် Light Box, Shop Name, Bus Stand, Structure များကို လည်း ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိပါသည်။စီးပွားရေး ကြော်ငြာ Sign Board များကို လူကြီး မင်းတို့ စိတ်တိုင်းကျ ကိုယ်ပိုင် Board အဖြစ် တပ်ဆင်ချင်သော်လည်းကောင်း ၊ နှစ်ချုပ်ဖြင့် ငှားရမ်း တပ်ဆင်ခြင်သော လည်းကောင်း လူကြီးမင်းတို့အတွက် The Sky Advertising ကုမ္ပဏီမှ စီစဉ် ဆောင်ရွက် ပေးလျက်ရှိပါသည်။ဒါ့ကြောင့်လူကြီး မင်းတို့ အနေဖြင့် မိမိ တို့ ၏ စီးပွားရေး လ်ုငန်းများကို Bill Board များဖြင့် ကြော်ငြာ လိုပါက The Sky Advertising ကုမ္ပဏီကို တိုက်ရိုက် ဆက်သွယ် မှာယူနိုင်ပါသည်။